Tirtirka feylasha kujira dib u soo kabashada qoto dheer - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>so>Tirtirka feylasha kujira dib u soo kabashada qoto dheer
Tirtirka feylasha kujira dib u soo kabashada qoto dheer
Ku soo celi Bplandatarecovery bilaash ah
Tutorial Graphic: Sidee dib loogu soo ceshan karaa faylasha tirtiray ee diskiga U? Qalabka diyaarinta
Qalabka diyaarinta kombiyuutarka ee ka shaqeeya Windows system
U disk meesha faylka si qalad ah looga tirtiray
Tallaabada 1: Fur shabakadda rasmiga ah ee Bplandatarecovery (www.Bplandatarecovery.cn), kala soo bixi nooca ugu dambeeyay ee bilaashka ah Bplandatarecovery software. Xusuusin: Ha u kaydinin barnaamijka kombuyuutarka U disk xogta lumay, si aadan ugu liistin faylalka lumay; Bplandatarecovery software waa nooc cagaar ah, waxaad u baahan tahay inaad ka takhalusto ka dib markaad soo dejiso si aad u furto softiweerka. Tallaabada 2: Xulo U disk-ga oo leh xog lumay barnaamijkii Bplandatarecovery, ka dibna guji badhanka "Soocelinta faylka" badhanka softiweerka. . Soo kabashada feylasha Muuqaalkani wuxuu isku darayaa qaabab kala duwan oo algorithm raadinta xogta ah, oo lagu dabaqi karo xaalado badan oo luminta xogta, sida faylka dib u soo kabashada, soo kabashada qaab, RAW soocelinta qeybta, burburka qeybinta ma furi karto soo kabashada xogta, iwm. . Soo celinta U disk tirtiray faylalka
Tallaabada 3: Guji batoonka "Bilow" si aad u horumariso heerka iskaanka. Xulashada dib loogu soo celiyo faylasha tirtiray waxaa laga hubiyaa sida caadiga ah, sidaa darteed waxaad si toos ah u dhajin kartaa batoonka "Bilow"; intaa waxaa dheer, waxaa lagu talinayaa in labada kale ee xulashooyinka ah "Soo kabashada Dhameystiran" iyo "Sawirro Dheeraad ah" Xulashada "Nooca faylka nooca" sidoo kale waa la hubiyaa, sidaa darteed softiweerka wuxuu sameyn karaa baaritaan buuxa oo qoto dheer oo ku saabsan disk-ga U. Haddii aad rabto inaad u habaynayso nooca feylka ee iskaanka qoto dheer, waxaad dhajin kartaa badhanka "Xulo nooca file" badhanka, ka dibna hubi koontaroolka loo baahan yahay. Noocyada faylasha si gaar ah loo baaray ayaa lagu muujiyey jaantuskan soo socda:
Restore U disk files tirtiray
Tallaabada 4: Dib u eegis oo ka hel faylasha natiijooyinka iskaanka. Sidee loo xukumaa in xogta lumay dib loo soo kaban karo? Kaliya sahaminta xogta. Laba jeer guji feylka si aad u furto daaqada hormariska oo aad u aragto faylka asalka ah .. Sida ku cad shaxanka soo socda, muuqaalka feylku waa caadi, oo muujinaya in faylka si caadi ah loo soo celin karo. Bplandatarecovery wuxuu taageersan yahay aragtida hore ee xogta badan sida sawirada, fiidiyowyada, maqalka, feylasha qoraalka, dukumiintiyada xafiiska, faylasha PDF, iwm, wuxuuna si wax ku ool ah u go'aamin karaa haddii faylasha si caadi ah loo soo ceshan karo. Dib u soo celinta faylasha laga tirtiray U disk
Tallaabada 5: Badbaadi faylka. Haddii barnaamijku horay u diiwaangashanaa, si toos ah waad u nuqulan kartaa faylka; haddii aadan isdiiwaangalin, fadlan guji barta rasmiga ah ee internetka si aad u iibsato, u soo iibsato softiweerka diiwaangashan ka dibna keydso faylka. Xulo faylka aad rabto ee natiijooyinka skaanka, ka dibna midig-guji oo dooro ikhtiyaarka "Nuqul ku Fayl gaaraya". Intaa ka dib, waxaad ku cayimi kartaa goobta kombiyuutarkaaga si aad u keydisid faylasha soo kabsaday. Dib u soo ceshay U disk tirtiray faylalka
1. Soo kabashada faylasha diskiga ah lama tirtiray FAQ. Ka waran dukumiintiyada? Ka dib marka soo kabashada kombiyuutarka soo kabashada ee kombiyuutarka la soo gabagabeeyo baaritaanka, xogta loo baahan yahay lagama helo faylalka ku taxan.Waxaa jira laba sababood oo suurtagal ah: Marka hore, macluumaadka lumay ayaa dib loo sifeeyay, iyo kan loo baahan yahay lama baari karo. Fayl; Marka labaad, habka dib u soo celintu ma saxsana. Xaaladdan oo kale, waxaa lagu talinayaa in lagala tashado adeegga macaamiisha internetka si looga caawiyo falanqaynta sababta iyo xallinta. 2. Xogta dib-loo-qoray ma laga soo kaban karaa?
Maya. Tiknoolajiyadda soo-kabashada xogta waxay soo kaban kartaa oo keliya xogta aan la qorin. Haddii faylasha kujira diskka U ayaa la tirtiraa, ka dibna faylasha lagu kaydiyaa U disk-ga, tan ayaa laga yaabaa inay dib ugu laabato faylasha lumay. 3. Maxaa ka khaldan feylasha dib loo soo helay oo la jeexjeexay oo aan dib loo siikarin? Ka dib markii faylka la soo celiyo, faylka la xaddiday iyo kan aan laga bogsan dib ayaa loo qori karaa, tusaale ahaan, ka dib markii faylka lumay, faylka loo qoro qaybtii xogta ka lumay, faylka lumayna la baabi'iyo; Sababtoo ah habkaan soo kabashada ayaa khaldan. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa inaad la xiriirto adeegga macaamiisha internetka si aad uga caawiso falanqaynta sababaha iyo xalalka. 4. Miyaa la isku dayi karaa barnaamijyada soo kabashada xogta ee Bplandatarecovery marka hore?
Haa. Ka dib markaad soo dejiso softiweerka bogga rasmiga ah, waa nooc tijaabo ah, nooca tijaabada ahna si bilaash ah ayey u baari kartaa oo u fiirin kartaa faylasha. Marxaladda tijaabada, waxaad go'aan ka gaari kartaa in faylka si guul leh looga soo kaban karo.
PreSidee dib loogu soo celiyaa feylasha tirtiray ee diskiga U? Casharrada ugu dambeeyay ee garaafyada
NextMuuqaal hordhac ah ayaa tirtiray xogta diskiga U